Qin's Moon (Lazyass_Fansub) - TOTORO ANIME PLUS
February 4, 2019 February 7, 2019 - LeaveaComment
Title : Qin’s Moon Season 1
Genres : Action, Historical, Martial Art, Fantasy
သင်ဟာ anime genre တွေထဲမှာ Historical genre ကို ကြိုက်တဲ့ သူ တစ်ယောက်လား? ဒါမှမဟုတ် သင်ဟာ (Wuxia series) တရုတ်သိုင်းကားတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူလား?
အဲ့လိုဆိုရင်တော့ Qin’s Moon ဟာ သင် ကြည့်သင့်တဲ့ တရုတ်3D animation ဖြစ်ပါတယ်။
Qin’s Moon ဟာ ထိုင်ဝမ် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးသော Wuxia 3D animation ဖြစ်ပါတယ်။ 2007 ခုနှစ်မှာ စတင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ တရုတ်နာမည်ကတော့ 秦时明月; (pinyin: qín shí míng yuè) ဖြစ်ပြီး “Qin ခေတ်၏ တောက်ပသော လဝန်း” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်တဲ့ Tian Ming ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်ပြီး သူ့အကြောင်းကို သိုင်းအကြောင်းတွေ ၊ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တွေ ၊ သမိုင်းရာဇဝင်တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီး ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အဲ့ Qin ခေတ်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ လူတွေ (ဥပမာ – Qin Shi Huang ၊ Jing Ke ၊ Zhang Liang ) အပြင် အဲ့ခေတ်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရပ်ကျောင်းတွေ၊ ဝါဒတွေ (Mohism မော့ဝါဒ၊ Confucianism ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ Taoism တာအိုဝါဒ) စတာတွေ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းဆင်ထားတာ တွေ့နိုင်မှာပါ။
character တွေကလဲ unique ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းမှာ သမိုင်း အကြောင်းတွေအပြင် အချစ်တွေ ၊ ဟာသ တွေ၊ အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးပမ်းတာတွေ ပါဝင်ပြီး တစ်ပိုင်းပြီး တစ်ပိုင်း ကြည့်ချင်အောင် စွဲဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် animation ကလဲ season တစ်ခုထက် တစ်ခု သိသိသာသာ ပိုကောင်းလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။
ခုလောလောဆယ်ထိတော့ season4ခုထွက်ထားပြီး စုစုပေါင်း 99 ပိုင်း ရှိပါတယ်။ season5ထပ်ထွက်လိမ့်အုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကြည့်ချင်သူများကတော့ အောက်ပါ Youtube link မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (Torrent link လဲ ရှိသလိုပါပဲ)
Previous Article Planetarian (Lazyass_Fansub)
Next Article Tale Of Zestiria The X Season 1 (Lazyass_Fansub)